Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fikarohana Jupiter vaovao avy amin'ny NASA Juno Probe
Ny fikarohana vaovao avy amin'ny NASA's Juno probe mihodidina an'i Jupiter dia manome sary feno kokoa momba ny fomba anomezan'ireo endri-javatra atmosfera miavaka sy miloko amin'ny planeta momba ireo dingana tsy hita maso eo ambanin'ny rahona. Ny vokatra dia manasongadina ny fiasan'ny atiny amin'ny fehikibo sy ny faritry ny rahona manodidina an'i Jupiter, ary koa ny rivodoza polar ary na dia ny teboka mena lehibe aza.
Ny mpikaroka dia namoaka lahatsoratra maromaro momba ny zavatra hitan'i Juno momba ny atmosfera androany tao amin'ny diary Science and the Journal of Geophysical Research: Planets. Nisy taratasy fanampiny nipoitra tao amin'ny laharana roa farany amin'ny Taratasy Fikarohana Geofizika.
"Ireo fandinihana vaovao avy amin'i Juno ireo dia manokatra rakitra vaovao momba ny endri-javatra hita maso an'i Jupiter," hoy i Lori Glaze, talen'ny sampana siansa planeta NASA ao amin'ny foiben'ny masoivoho any Washington. "Ny taratasy tsirairay dia manazava ny lafiny samihafa amin'ny fizotry ny atmosfera amin'ny planeta - ohatra mahafinaritra amin'ny fomba hanamafisan'ny ekipa siansa iraisam-pirenena ny fahatakarana ny rafi-masoandro."
Niditra tao amin'ny orbitan'i Jupiter i Juno tamin'ny taona 2016. Nandritra ny fandalovan'ny sambon-danitra tsirairay ny planeta ka hatramin'izao, dia nisy andiana zavamaneno manokana nijery teo ambanin'ny rahona mikorontana.
"Talohan'izay, nanaitra anay i Juno tamin'ny filazana fa lasa lalina kokoa noho ny nantenaina ny zava-niseho tao amin'ny atmosfera Jupiter," hoy i Scott Bolton, mpanadihady lehibe an'i Juno avy ao amin'ny Southwest Research Institute ao San Antonio ary mpanoratra ny gazety Journal Science momba ny halalin'ny vortices Jupiter. "Ankehitriny, manomboka manambatra ireo singa tsirairay ireo izahay ary mahazo ny tena fahatakaranay voalohany ny fomba fiasan'ny atmosfera tsara tarehy sy feno herisetra ao Jupiter - amin'ny 3D."
Ny radiometer mikraoba (MWR) an'i Juno dia ahafahan'ny mpahay siansa misionera mijery ao ambanin'ny tampon'ny rahon'i Jupiter ary mandinika ny firafitry ny tafio-drivotra maro be. Ny malaza indrindra amin'ireo tafio-drivotra ireo dia ilay anticyclone malaza fantatra amin'ny anarana hoe Toerana Mena Lehibe. Malalaka kokoa noho ny tany, io vortex crimson io dia nahaliana ny mpahay siansa hatramin'ny nahitana azy efa ho roa taonjato lasa izay.
Ny vokatra vaovao dia mampiseho fa ny rivodoza dia mafana kokoa amin'ny ambony, miaraka amin'ny hamafin'ny atmosfera ambany kokoa, raha mangatsiaka kokoa ny any ambany, miaraka amin'ny hakitroky ambony kokoa. Ny anticyclone, izay mihodina amin'ny lalana mifanohitra, dia mangatsiaka kokoa ny ambony fa mafana kokoa ny ambany.
Ny fikarohana ihany koa dia manondro fa ireo tafio-drivotra ireo dia avo lavitra noho ny efa nampoizina, ka ny sasany miitatra 60 kilaometatra (100 kilometatra) eo ambanin'ny tampon'ny rahona ary ny hafa, anisan'izany ny Tany Mena Lehibe, izay mahatratra 200 kilaometatra (350 kilometatra). Ity fahitana tsy nampoizina ity dia mampiseho fa mandrakotra ny faritra ivelan'ny faritra misy rano miforona sy rahona ny vortize, eo ambanin'ny halalin'ny masoandro manafana ny atmosfera.
Ny haavony sy ny haben'ny Tany Mena Lehibe dia midika fa ny fifantohan'ny vesatry ny atmosfera ao anatin'ilay tafio-drivotra izay mety ho hitan'ny fitaovana mandalina ny sahan'ny sisan'i Jupiter. Ny sidina Juno roa akaiky eo amin'ny toerana malaza indrindra ao Jupiter dia nanome fahafahana hikaroka ny sonia misintona ny rivo-doza ary mameno ny valin'ny MWR amin'ny halaliny.
Miaraka amin'i Juno nandeha iva teo ambonin'ny rahon'i Jupiter tamin'ny 130,000 mph (209,000 kph) teo amin'ny 0.01 mph (400 kph) ny mpahay siansa Juno dia afaka nandrefy ny fiovan'ny hafainganam-pandeha ho 650 milimetatra isan-tsegondra tamin'ny alàlan'ny antenne fanaraha-maso Deep Space Network an'ny NASA, avy amin'ny halavirana 300 tapitrisa kilaometatra (500 mahery). tapitrisa kilometatra). Izany dia nahafahan'ny ekipa nanery ny halalin'ny Tany Mena Lehibe ho XNUMX kilaometatra eo ho eo ambanin'ny tampon'ny rahona.
"Ny fahitsiana takiana mba hahazoana ny herin'ny Red Spot mandritra ny sidina amin'ny Jolay 2019 dia mampitolagaga," hoy i Marzia Parisi, mpahay siansa Juno avy amin'ny NASA's Jet Propulsion Laboratory any Southern California ary mpanoratra mpanoratra iray ao amin'ny Journal Science momba ny gravity overflights. Toerana mena lehibe. "Ny fahafahantsika mameno ny fikarohana nataon'ny MWR amin'ny halalin'ny dia manome antsika fahatokisana lehibe fa ny andrana amin'ny sinton'ny ho avy any Jupiter dia hanome valiny mahaliana mitovy."
Fehikibo sy faritra
Ankoatra ny rivodoza sy ny anticyclone, fantatra amin'ny fehikibo sy faritra miavaka i Jupiter - rahona fotsy sy mena mihodidina ny planeta. Rivotra mahery avy any atsinanana-andrefana mivezivezy amin'ny lalana mifanohitra no mampisaraka ny tarika. Hitan’i Juno teo aloha fa mahatratra 2,000 3,200 kilaometatra eo ho eo ny halalin’ireo rivotra ireo. Mbola miezaka mamaha ny misterin'ny fiforonan'ny jet stream ny mpikaroka. Ny angon-drakitra nangonin'ny MWR an'i Juno nandritra ny fandalovan'ny maro dia mampiseho famantarana iray azo atao: fa ny entona amoniaka ao amin'ny atmosfera dia mandeha miakatra sy midina amin'ny fampifanarahana miavaka amin'ireo renirano jet voamarika.
"Tamin'ny fanarahana ny amoniaka, dia nahita sela mivezivezy any amin'ny hemisphere avaratra sy atsimo izahay izay mitovy amin'ny 'Sela Ferrel', izay mifehy ny ankamaroan'ny toetr'andro eto an-tany", hoy i Keren Duer, mpianatra nahazo diplaoma avy amin'ny Weizmann Institute. momba ny Siansa ao Israely ary mpanoratra mpitarika ny gazety Journal Science momba ny sela toy ny Ferrel ao Jupiter. "Raha manana sela Ferrel iray isaky ny hemisphere ny Tany, i Jupiter dia manana valo - avo 30 heny ny tsirairay avy."
Ny angon-drakitra MWR an'i Juno dia mampiseho ihany koa fa ny fehikibo sy ny faritra dia mandalo tetezamita manodidina ny 40 kilaometatra (65 kilometatra) eo ambanin'ny rahon'ny ranon'i Jupiter. Amin'ny halaliny marivo, ny fehin'i Jupiter dia mamiratra kokoa amin'ny hazavana mikraoba noho ny faritra manodidina. Saingy amin'ny ambaratonga lalindalina kokoa, eo ambanin'ny rahon'ny rano, ny mifanohitra amin'izany - izay mampiseho fitoviana amin'ny ranomasina misy antsika.
"Antsoinay hoe 'Jovicline' ity ambaratonga ity raha ampitahaina amin'ny sosona tetezamita hita any amin'ny ranomasimbe eto an-tany, fantatra amin'ny anarana hoe thermocline - izay ny ranon-dranomasina dia miova tampoka avy amin'ny hafanana mafana mankany amin'ny hatsiaka," hoy i Leigh Fletcher, mpahay siansa Juno mandray anjara amin'ny Oniversite. ao amin'ny Leicester any Royaume-Uni ary mpanoratra mpitarika ny gazety ao amin'ny Journal of Geophysical Research: Planeta manasongadina ny fandinihan'i Juno amin'ny onjam-peo ny fehikibo sy ny faritra mafana ao Jupiter.
Hitan'i Juno teo aloha ny firafitry ny tafio-drivotra goavam-be teo amin'ny andrin'i Jupiter roa - valo mivondrona amin'ny endrika octagonal any avaratra ary dimy mirindra amin'ny lamina pentagonal any atsimo. Ankehitriny, dimy taona aty aoriana, ireo mpahay siansa momba ny misiônera mampiasa ny fandinihana nataon'ny Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) an'ny sambon-danitra dia nanapa-kevitra fa ireo zava-mitranga amin'ny atmosfera ireo dia tena mahazaka, mijanona amin'ny toerana iray ihany.
"Ny rivodoza Jupiter dia misy fiantraikany amin'ny fihetsiky ny tsirairay, ka mahatonga azy ireo hikorontana amin'ny toeran'ny equilibrium," hoy i Alessandro Mura, mpiara-mandinika an'i Juno ao amin'ny National Institute for Astrophysics any Roma ary mpanoratra mpanoratra vao haingana ao amin'ny Geophysical Research Letters momba ny oscillations sy ny fahamarinan-toerana. ao amin'ny cyclone polar Jupiter. "Ny fihetsik'ireo oscillations miadana ireo dia manondro fa manana faka lalina izy ireo."
Ny antontan-taratasin'ny JIRAM ihany koa dia manondro fa, tahaka ny rivo-doza eto ambonin'ny tany, ireo rivodoza ireo dia te-hifindra any amin'ny tampony, saingy ny rivodoza izay eo afovoan'ny tsato-kazo tsirairay dia manosika azy ireo hiverina. Ity fifandanjana ity dia manazava ny toerana misy ny rivodoza sy ny isa samihafa isaky ny tsato-kazo.